Hamtramck, Michigan: Maxay tahay magaalada Mareykanka ku taalla ee ay Muslimiintu maamulaan | Dayniile.com
Home Warkii Hamtramck, Michigan: Maxay tahay magaalada Mareykanka ku taalla ee ay Muslimiintu maamulaan
Hamtramck, Michigan: Maxay tahay magaalada Mareykanka ku taalla ee ay Muslimiintu maamulaan
Haddii aad ku dhex lugeyso magaalada Hamtramck ee gobolka Michigan waxaad dareemeysaa sidii inaad dalxiis ku mareyso caalamka.
Dukaan lagu iibiyo cuntada Polish-ka iyo foorno lagu sameeyo rootiga bariga Yurub ayaa ku barbar yaalla suuq lagu iibiyo alaabta oo ay leeyihiin dad reer Yemen ah iyo dukaan lagu gado dharka Bengali-ga. Gambaleelka kaniisadda ayaa ka garab dhawaaqaya aadaanka salaadda ee masaajidka Muslimiinta.
“Waa adduunyadii oo la isugu keenay labo meyl oo labo jibaar ah gudahood” – Hamtramck waxay leedahay hal ku dhigyadeeda, waxaana dhulkeeda oo baaxaddiisu dhan tahay 5 sq km looga hadlaa ilaa 30 luuqadood oo kala duwan.
Bishan waxay magaaladan oo shacabkeedu yihiin 28,000 sameysay taariikh cusub. Dadweynaha Hamtramck waxa ay soo doorteen dowlad hoose oo xubnaheeda dhammaantood ay yihiin Muslimiin halka duqa magaaladana loo doortay nin Muslim ah. Waxay noqotay magaaladii ugu horreysay ee Mareykanka ku taalla oo abid yeelata dowlad ka kooban Muslimiinta Mareykanka.
Muslimiinta oo mar magaaladan gudaheeda ku wajahayay cunsuriyad waxay noqdeen udub dhexaadka goobtan dhaqamada kala duwan ka jiraan, haddana dadka Muslimiinta ah waxayba ka badan yihiin kala bar ka mid ah bulshada ku nool magaalada.
Inkastoo ay jiraan caqabado dhaqaale iyo doodo kulul oo ku saabsan kala duwanaanta dhaqanka, dadka daggan Hamtramck ee diimaha kala duwan leh waxay ku guuleysteen inay si wadajir ah u noolaadaan, iyagoo magaaladooda ka dhigay mid tusaale u noqon karta Mareykanka intiisa kale ee mustaqbalka rajeynaya in isdhexgal fiican la sameeyo.
Balse Hamtramck ma noqon doontaa meel maamulkeedu gaar yahay ama sharci u gaar ah leh?
Raadka taariikhda Hamtramck wuxuu soo billowday markii ay ahaan jirtay meesha ay soo dagaan dadka ka imaada Jarmalka, wuxuuna soo socday ilaa maanta oo ay noqotay magaaladii ugu horreysay Mareykanka ee ay Muslimiin maamulaan.
Dadku way la qabsadeen inay isku dhex wadaan dhaqamadooda kala duwan.
“Layaab ma laha in la arko haweeney xijaaban iyo mid goonno gaaban xiran oo is garab socda. Waa magaaladeenna iyo shacabkeenna,” ayuu yiri Zlatan Sadikovic, oo ah nin qaxootinnimo uga yimid waddanka Bosnia, haddana halkaas ku leh makhaayad qaxwada lagu iibiyo.
Florian Roman Catholic Church in Hamtramck, Michigan.
Intii lagu guda jiray qarnigii 20-aad, waxaa magaaladan loo yaqaannay “Waarsow-da yar”, maadaama dadkii kasoo qaxay Poland ay kusoo qulqulayeen. Magaaladan waxay ka mid ahayd meelihii uu ku hakaday markii uu 1987-kii Mareykanka booqashada ku tagay baadarigii ugu weynaa masiixiyiinta ee Poland u dhashay, Pope Pope John Paul II.
Sanadkii 1970-kii, qiyaastii 90% ka mid ah dadka ku nool magaalada waxay ahaayeen kuwo asal ahaan kasoo jeeday Poland.
Hase yeeshee, isla 1970-meeyadii waxaa billowday hoos u dhicii warshadaha baabuurta soo saara ee Mareykanka, dadka dhallinyarada ah iyo kuwa maalqabeennada ah ee kasoo jeeday Poland-na waxay billaabeen inay u qaxaan tuulooyinka.
Isbaddalkaas ayaa Hamtramck ka dhigay mid ka mid ah magaalooyinka ugu saboolsan gobolka Michigan, balse maciishadda raqiiska ah waxay soo jiidatay dadka soo galootiga ah ee aan dhaqaalaha heysanin.
30-kii sano ee lasoo dhaafay gudahooda, Hamtramck isbaddal ayay sameysay mar kale waxayna bartilmaameed u noqotay dadka carabta ah iyo kuwa reer Aasiya ee qaxootinnimada ku imaanaya Mareykanka, gaar ahaan reer Yemen iyo reer Bangladesh.
Maanta 42% ka mid ah dadka ku nool magaaladan waa kuwo ku dhashay dibadda. In ka badan kalabar ayaa la aaminsan yahay inay yihiin Muslimiin si sax ah u cibaadeysta.
‘Muslim ma ihi haddana bisha Ramadaan waan Soomaa’
Ilhaan Cumar oo madaxweyne Biden ka codsatay arrin ku saabsan Muslimiinta
Dowladda cusub ee la doortay xubnaha ay ka kooban tahay waxay muujinayaan isbaddalka ka socda Hamtramck. Maamulka dowladda hoose ee cusub waxaa ku jira labo qof oo Bengali-American ah, saddex Yamaniyiin-Mareykan ah iyo hal qof oo Polish-American ah oo diinta Islaamka qaatay.
Amer Ghalib oo ku guuleystay codad gaaraya 68% waxa uu noqday Yemeni-American-kii ugu horreeyay ee duq magaalo ka noqda dalka Mareykanka.
“Waxaan dareemayaa in la i sharfay, balse waxaan ogahay inay i saaran tahay mas’uuliyad wayn,” ayuu yiri Mr Ghalib, oo 41 jir ah.
Ninkan oo ku dhashay xaafad ku taalla Yemen, waxa uu Mareykanka tagay isagoo 17 sano jir ah. Markii ugu horreysay waxa uu ka shaqo billaabay warshad sameysa qaybaha caagga ah ee baabuurta oo ku taalla meel u dhow magaalada Hamtramck.
Markii dambe waxa uu bartay luuqadda Ingiriiska wuxuuna qaatay tababar dhanka caafimaadka ah, haddana waxa uu ahaa shaqaale caafimaad oo rasmi ah.
“Hamtramck waa meel ay si aad isugu dhow oo wadajir ugu nool yihiin kooxo dhaqamo kala duwan leh,” ayay tiri Amanda Jaczkowski, oo ka mid ah xubnaha dowladda hoose ee lasoo doortay.
Amanda Jaczkowski, waxay ka mid tahay xubnaha la doortay ee dowladda hoose
Lix sano ka hor, markii ay magaalada noqotay meeshii ugu horreysay ee Mareykan ah oo dowlad Muslimiin ah laga doortay waxaa kusoo yaacay warbaahinta caalamka oo tabinayay sheekooyinka Hamtramck.
Waxaa soo baxay warar sheegayay in dowladdan hoose ee Islaamiga ah laga yaabo in ay magaalada kusoo rogi doonto
Waaxda tirakoobka ee Mareykanka ma aruuriso xogta ku saabsan diinta, balse xarunta cilmi baarista ee Pew ayaa tirakoob ay sameysay 2020-kii ku sheegtay in Mareykanka ay ku nool yihiin dad gaaraya qiyaastii 3.85 milyan oo muslimiin ah.
Tiradaas waxay noqoneysaa 1.1% oo ka mid ah shacabka guud ee Mareykanka. Marka la gaaro sanadka 2040-ka, waxaa la saadaalinayaa Islaamka uu noqdo diinta labaad ee ugu weyn Mareykanka, marka laga soo tago masiixiyadda.
Inkastoo kobacaas uu jiro haddana Muslimiinta waxaa Mareykanka looga arkaa kuwo dhibaato keenaya.
Muslim men pray during their weekly Friday noon special prayer at the Al-Islah Islamic Center Mosque in Hamtramck, Michigan.
Hadda oo 20 sano laga joogo markii ay dhaceen weerarradii 9/11, islaam naceybka wali wuxuu daba socdaa Muslimiinta iyo Carabta kale ee ku nool Mareykanka.
Ku dhawaad kalabar ka mid ah muslimiinta Mareykanka ah ayaa xarunta Pew u sheegay sanadkii 2016-kii in dhammaantood ay si shakhsi shakhsi ah ula kulmeen nooc cunsuriyad ah intii uu xilka madaxweynaha hayay Donald Trump.
Madaxweyne Trump ayaa soo jeediyay in Mareykanka laga mamnuuco Muslimiinta soo galootiga ah ee ka imaanaya dalalka ay Muslimiinya aqlabiyadda ku yihiin.
Cilmi baareyaasha ayaa sidoo kale ogaaday in shacabka Mareykanka ay wali fikrado xun ka aaminsan yihiin dadka Muslimiinta ah.
In ka badan kalabar ka mid ah shacabka Mareykanka waxay sheegeen inaysan aqoonin qof Muslim ah, balse kuwa Muslimiinta bartay waxay aaminsan yihiin in Islaamku uusan ka halis badneyn diimaha kale.
Hamtramck ayaase tusaale fiican u ah sida ay isula noolaan karaan Muslimiinta iyo dadka diimaha kale heysta.
Previous articleSomaliland oo digniin kama danbaysa siisay dadka kasoo jeeda Koonfur-galbeed Soomaaliya
Next articleMadaxa Xukuumadda Rooble oo baaq deg deg ah u diray Madaxda Afar Dowlad Goboleed
Madaxweynaha South Sudan Salva Kiir oo sheegay in askarta dalkaas ee kasoo qaliin jebisay xeryaha tababarka ciidanka.
Weriyaha ka tirsanaa teleefishinka CNN oo laga joojiyay shaqada kadib markii uu caawiyay walaalkii oo ah barasaabkii New York
Magaalada Dimishiq ee caasimadda Suuriya oo noqotay magaalada ugu raqiisan dhanka nolosha
Haweenay Al-Shabaab tababartay oo ka qeyb gashay dhoolatuska ciiddanka milatariga Kenya
Taliyihii Booliska Beledweyne oo xilkii laga qaaday & mid cusub oo la Magacaabay
Xukuumadda ROOBLLE oo soo saaray go’aan la xiriira doorashooyinka dalka
I will build amazing digital marketing strategy
About This Gig Hi, we are BASLIN's. We provide clients with strategic support for a thriving business and growing sales. We're here to help you find...
Safiirka Soomaaliya ee Hindiya oo ka qeybgashay shir muhiim ah
Ururka Midowga Afrika oo sheegay inuu go’aansaday in howlgalka uu hadda...
Virility Ex – All Natural Male Enhancement
Taliye Bishaar: Saxmadda waddooyinka waxaa sabab u ah Gaadiidka Xamuulka &...
Taliye Ciidan Oo Saaka Ku Dhintay Dagaalkii Ka Dhacay Magaalada Guriceel
Biyo yaraan baahsan oo laga digay inay dunida wajihi doonto sanadaha...
Faquuqa ay dareemaan Muslimiinta Madow marka ay timaaddo haasaawaha Muslimiinta kale...
Ciidamo gadoodsan oo xirtay wadada u dhaxeysa Garoowe & laas-Caanood
axmed shiikh - November 2, 2021 0